Nzọụkwụ Ọzọ maka Ọrụ SharePoint: Management & Development
2 Ka 2017
Nzọụkwụ Ọzọ maka Ọrụ SharePoint
N'ụzọ dị otú a, ị nwere atụmatụ SharePoint gị na-atamu ma na-atamu ntamu dika obere pusi. Ndị nduzi na-aja gị mma maka mgbanwe dị ukwuu na mgbalị a haziri ahazi, na mgbakwunye na ikike iji nweta ozi dị mkpa site na ebe ọ bụla. I meela ihe ole na ole ndị ọzọ nwere, ikele!
Kwa oge, ihe gbasara ajụjụ ga-ewe mgbe ...
Enwere ike icho onyonyo ahụ na nhazi nke nzukọ anyi?
Anyị nwere ike itinye nke a na ngwanrọ ọzọ anyị?
Enwere ike ịhazi usoro ahụ na ihe mgbaru ọsọ na ọ dịghị mkpa ka ọ kwadebe?
Ọ na-arụ ọrụ dị mma dịka o yiri ka ọ dị, mana ọ ga-abụ ihe dị mma ma ọ bụrụ na ...
Nzaghachi na nyocha ndị a na-arụpụta oge na-aga n'ihu na akụkụ nke onye nchịkwa na-achọ ka ị na-eyi uwe elu gị, n'ọnọdụ ọ bụla ruo oge ụfọdụ. Mee nke a, jide elu ... ị bụghị onye mmebe.
Ntughari uzo na-aga n'ihu ka oganihu bu uzo ozo nke puru igosi ike karia na mbido, ma o bu ihe di mfe iji bia n'ezi ndokwa ma kwadebe ya. Site na imeri gị Microsoft MCSD: Asambodo Nyocha Bu, ị nwere ike idozi onwe gị iji mee ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta ihe dị iche iche nke SharePoint mgbe ụfọdụ. Dịka ụgwọ ọrụ, ị na-arụ ọrụ ọzọ maka nchebe azụmahịa dị mkpa. Ọ bụ eziokwu a pụrụ ịdabere na ya weèb ndị injinia bụ ihe a na-achọpụtaghị n'oge a!
N'agbanyeghị ma ị na-arụ ọrụ otu usoro ma ọ bụ weèb ugbo, o doro anya na ọtụtụ awa ole na ole na-etinye ego na ịmepụta ọnọdụ nkesa gị iji dozie mkpa gị. Ọmụmụ ihe a nke SP na-agbanwe agbanwe na-enye gị ọnọdụ dị mma ma ọ bụrụ na ọ bụ ohere dị ukwuu iji mee ka ọganihu. Ị dị ka ugbu a nwere nkọwa dị elu na ala nke otu weèb ọrụ na ihe ọ na-ezubere na nzukọ gị.
Otutu oge, enwere ikike nke weputara SharePoint nke choro iwu obula. Ọ ga-abụ mkpọmkpọ ebe iji wuo ndokwa omenala mgbe ike dị ugbu a dị n'ime SharePoint n'onwe ya. N'ihe atụ ndị a, ọ bụ echiche dị oke mma iji nweta ihe siri ike nke dị na SharePoint, dịka ọmụmaatụ, nchịkọta saịtị, ngwa, ndenye, ọkwa, na ihe ndekọ. Ịkwesịrị ịkwalite onwe gị na ngwa SharePoint, Microsoft Office SharePoint Designer. Ọ na-eme ka nhazi dịgasị iche iche na-agụnye nke na-achọ ka mmemme ọ bụla ghara igbu.
Ị nwere ike ịzụlite nghọta gị na klas ndị isi SharePoint-karịsịa. Ihe ọmụmụ ndị a na-etinye gị na egwu iji banye n'ime ọganihu SharePoint site n'igosi na ị nwere ogo nghọta dị mkpa iji hazie koodu arụpụta na viable maka SharePoint:
Usoro Microsoft 2013 70-331 nke Microsoft SharePoint na-arụ ọrụ na-akwado ntọala na ndokwa. N'agbanyeghi na ị ga-enwe ike ịhazi ihe ọmụma a ugbu a, i nwere ike irite uru site n'ichebawanye uru nke nghọta na usoro a na-enye.
Mgbe ị dị njikere ịga n'ihu site na SharePoint Padawan ka Jedi Master, usoro Microsoft SharePoint Server 2013 70-332 ga-enwekwu ọganihu ga-enweta gị n'ebe ahụ! Ọ bụ ihe dị oke iche iche maka ime ihe n'echiche na ịmebata ngwọta omenala, gụnyere ụlọ ọrụ netwọk azụmahịa iji jikọọ SharePoint na usoro data gị ndị ọzọ.
Dị ka ụgwọ ọrụ, usoro abụọ a na-edozi gị maka nyocha Microsoft ndị metụtara ya na ohere ịchọrọ ịgbakwunye ha na MCSE: Nchịkọta ọrụ.
Ihe na-esote na MCSD: Ntube akwukwọ Ntupụta bụ iji nweta MCSA: Web Applications ma ọ bụ MCSA: Universal Windows Platform cert. Ị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụ, dịka ha abụọ dị mkpa maka mmelite SharePoint. N'ezie, ọ ga-abụ ihe ezi uche na-eso ma abụọ.
Enwere ule abụọ a chọrọ iji nweta MCSA asambodo, na ị ga-achọ ka ị kwadebe na aka na-eme ka ị nweta nghọta zuru ezu nke ASP.NET or C # mmemme. Igwe ihe ngosi na-enyere gị aka ibudata ihe atụ nke ngwa SharePoint, Microsoft na-enyekwa ijegharị na-ekpuchi ụdị ọnọdụ dịgasị iche iche. Site na ihe ndị a na-akụzi ihe, onye nchịkọta zuru oke dị ka onwe gị nwere ike ime ka ọganihu gị na-enwe ọganihu na-enwu gbaa.
Ozugbo a kwusịrị usoro ndị a, ị nwere ike mezue gị Onye Ntupụta Ihe ọ bụ site na ịgafe Nyocha Microsoft Nchịkọta SharePoint Server 2013 Core Solutions. Nyocha a na-ekwu na ị na-eji usoro mmemme na ntinye koodu eme ihe iji mee ka ụlọ ọrụ SharePoint mara mma maka tọọ gị.
Okporo ụzọ gaa Ntupụta akwụkwọ nyocha nwere ike ịbụ ahụmahụ nkuzi na-agbanwe agbanwe. Ihe ndị na-egosi na ha enweghị ike ịbịaru nso ugbu a nwere ike ịgbazi naanị otu di na nwunye. Ịnwere ike ịme onye ingenia ọhụrụ gị nke ọma dị ka uru ị na-enweta na nzukọ gị si pụọ!
Laptọọpụ Laaịtị Microsoft nke Windows 10 S: Nkọwapụta, Ahịa na atụmatụ